China Casserole in Round endrika SKU NO.271-272-273-274-275-276 Manufacturers sy Suppliers | SJZ JINXUAN
Miavaka Kitchen-to-javatra iray Table casserole ny fitaratra ataovy mora ny mahandro sakafo mialoha ny fotoana sy ny toeram-pivarotana ao amin'ny vata fampangatsiahana na vata fampangatsiahana ho an'ny tatỳ aoriana. Tsara indrindra rehetra, ny casserole fiovana kanto avy amin'ny lafaoro akory latabatra fametrahana ny fanompoana tsara tarehy, ary ny sisa tsy lany dia afaka manaraka indray ao anaty vata fampangatsiahana amin'ny faran'ny ny alina. Mariho tsara: Aza manakisaka fitaratra casserole mivantana avy amin'ny vata fampangatsiahana ny lafaoro. Aoka mahandro sakafo Thaw alohan'ny na reheating amin'ny fanendasa-. Aza adino ny mampiasa potholder rehefa manazava ...
Ny fitaratra casserole ataovy mora ny mahandro sakafo mialoha ny fotoana sy ny toeram-pivarotana ao amin'ny vata fampangatsiahana na vata fampangatsiahana ho an'ny tatỳ aoriana. Tsara indrindra rehetra, ny casserole fiovana kanto avy amin'ny lafaoro akory latabatra fametrahana ny fanompoana tsara tarehy, ary ny sisa tsy lany dia afaka manaraka indray ao anaty vata fampangatsiahana amin'ny faran'ny ny alina.
Mariho tsara: Aza manakisaka fitaratra casserole mivantana avy amin'ny vata fampangatsiahana ny lafaoro. Aoka mahandro sakafo Thaw alohan'ny na reheating amin'ny fanendasa-. Aza adino ny mampiasa potholder rehefa mandamina mafana fitaratra.
Ny fitaratra casserole dia azo ampiasaina mba hanendasany na reheat sakafo ao amin'ny lafaoro mahazatra na amin'ny microwave lafaoro. Jereo amin'ny alalan'ny lafiny fitaratra ahafahana effortlessly peaking amin'ny fandrosoana ny sakafo rehefa fanaova, manome nanampy fanaraha-maso ny vokatra farany.
Ireo casseroles zavatra nataon-borosilicate fitaratra-tsara ho an'ny fitomboana mafana ka noho izany tsy mora hanorotoro rehefa tratran'ny hafanana miova.
Mariho tsara: Glass casserole tsy tokony ho ampiasaina ambany Grill, amin'ny stovetop, na amin'ny toaka, na am-bifotsy hafanana burners ho toy ny loharanom-baovao mivantana hafanana.
Lafiny Integrated mitantam mamela ho soa aman-tsara nanandratra ny fitaratra casserole sy nivoaka ny fatana sy ny lakozia ho any amin'ny efitra fisakafoana-latabatra na buffet, ary miverina indray. Ny lafiny mety famohana manampy antoka azo antoka mafy, na dia manao akanjo matevina mitts lafaoro.
Previous: Casserole in Oval endrika SKU NO.277-278-279-2710-2711
Next: Jasper miloko Borosilicate Glass SKU NO.2670
Casserole in Round endrika SKU NO.272D
Casserole in Round endrika SKU NO.273D
Casserole in Oval endrika SKU NO.277-278-279-2710 ...
Casserole in Oval endrika SKU NO.2712
Casserole in Round endrika SKU NO.274D
2019 Ambiente Frankfurt Booth hafanana manohitra ...
Borosilicate Glass Casserole , Borosilicate Glass Sakafo fitoeran-javatra , Borosilicate Glass Pot , Borosilicate Glass Sakafo kaontenera , Borosilicate Glass Bakeware , Double Walled Tea Glass,